Waaheen Media Group » “Komishanka waxaad moodaa inay dhagaha ka furaysanayaan baaqayaga hase yeeshee dadweynaha ayaa dhagahooda furi doona.” Xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle
Browse:Home Videos “Komishanka waxaad moodaa inay dhagaha ka furaysanayaan baaqayaga hase yeeshee dadweynaha ayaa dhagahooda furi doona.” Xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle	“Komishanka waxaad moodaa inay dhagaha ka furaysanayaan baaqayaga hase yeeshee dadweynaha ayaa dhagahooda furi doona.” Xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle
Comments Off on “Komishanka waxaad moodaa inay dhagaha ka furaysanayaan baaqayaga hase yeeshee dadweynaha ayaa dhagahooda furi doona.” Xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle	Borama(Waaheen) Xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle oo ka tirsan Mudanayaasha Golaha Wakiiladda ee Gobolka Awdal ayaa Komishanka ugu baaqay inay wax ka qabtaan ciladaha ka yimi kaadh qaybinta Gobolka Awdal oo uu sheegay inay tahay mid dadweynaha gobolka lagaga duudsiyayo xuquuqdooda dastuuriga ah ee Codaynta Doorashada.
Xildhibaan Axmed Yaasiin waxa uu sheegay inay adagtahay inay dadku aqbalaan wax wada tijaabo ah oo aan wakhti loo siinin in ciladaha ka yimaada ee ay Komishanku sababeen, hadana iyaga la yidhaa ha isku qabaan oo la diido in fursad loo siiyo dibu-dhaca ku imanaya inay dadku kaadhadha qaataan.
Xildhibaan Axmed Yaasiin waxa uu ku hanjbaya inaanay Cod-bixin iyo Doorasho xalaal ahi aanay ku dhici dooni qaabka Komishanku u maamuleen kaadh qaybinta waxaanu yidhi “Dastuurka ayaa na faraya waana xuquuq aanu xaq u leenahay muddada ay doonto ha qaadatee inaanu Kaadhadhkayagii helno, maadaama lanagu tijaabiyo. Sidana Doorasho iyo Cod-bixin midkood-na ku dhici kari maayaan.”
Xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle waxa auu intaas raaciyey “Laba maalmood oo kaliya inaan kaadh ku qaadanaa ma socon doonto. afar iyo shan maalmood ba waanu u baahanahay.”
Mar uu ka hadlayey waxa ka dhalan kara haddii aan xal laga gaadhin cabashada Gobolka waxa uu yidhi “Komishanka waxaad moodaa inay dhagaha ka furaysanayaan baaqayaga, hase yeeshee dadweynaha ayaa dhagihiina furi doona.”